Shina: Mpanao Bilaogin-dahatsary Nanampy Ankizy Miasa Hiverina An-Tsekoly · Global Voices teny Malagasy
Shina: Mpanao Bilaogin-dahatsary Nanampy Ankizy Miasa Hiverina An-Tsekoly
Voadika ny 24 Febroary 2018 17:57 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, 日本語, Shqip, Español, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Martsa 2008)
Xu Alun, mpanao horonantsary bilaogy efa zokinjokiny mamerimberina fa “Ny marina no fahefana”, namoaka andiana horonantsary manafintohina nataony irery ao Ku6.com, tranonkala fizarana horonantsary malaza ao Shina. Tao anatin'ny fandrakofana mitohin'ny tantara telo, nampiseho tantara mampihetsimpo an'ny ankizy telo mpitatitra arintany ao Biji, tanàna kely ao Atsimo, miaraka amin'ny fisoloana vava mahomby eo amin'ny aterineto an'ny vondrona QQ nalamin'i Guo Jun, mitady hivezivezy eo anivon'ny mponina ny tantara, namoha ny fanahian'ny vahoaka. (Eto tsindrina mba hijerena ny horonantsary miaraka amin'ny dikanteny Anglisy)
(Ny horonantsary voalohany “Ankizy Mpitatitra Arintany” navoakan'i Alun tamin'ny 10 Febroary)
Eo amin'ny olona antsasan'ny tapitrisa no nanindry ny horonantsarin'i Alun nanomboka ny namoahany ny asany voalohany an'ny ankizy mpitatitra arintany tamin'ny Febroary. Niaraniasa tamin'ny Ku6.com, nanomboka nanao fanomezambola ho an'ireo ankizy telo ny mpampiasa ny aterineto mba hanampiana azy ireo andeha any an-tsekoly, ary farany, teo ambanin'ny tsindry mitombo avy amin'ny fisoloana vavan'ny Aterineto, nanapa-kevitra ny hirona ao amin'ny fandaharana fanampiana ny governemanta an-toerana, izay nampisondrotra ny antony. Mpanao bilaogy horonantsary Alun, ny mpamorona ny hetsika manontolo, nanatrimaso an'ny fandehan'ny fanampian'ny governemanta ary namoaka horonantsary roa manan-danja tao amin'ny bilaoginy.
“Mihoatra ny eritreritro ilay izy, tsy nihevitra aho fa hisy mpampiasa aterineto mafana fo betsaka hanohana ahy ,” hoy i Alun, “Tamin'ny voalohany, hanaparitaka ny tantara amin'ny alalan'ny Aterineto no tiako atao.” “Mihevitra aho fa amin'ny maha-olompirenenan'ny Repoblikan'ny Shina, anjarantsika sy adidintsika ny mampiseho ny tranganjavatra ratsy ao amin'ny fiarahamonina.” Araka ny mpandray anjara mavitrika hafa amin'ny hevitra, mpandraharaha 40 taona izay zatra niasa tao amin'ny haino aman-jery nandritra ny 10 taona mahery i Xu Alun ary manana efitra fiasana azy irery izay ao no atao ny horonantsariny fanadihadiana. Manana fanantenana momba ny toetsain'ny mponina mpampita vaovao izay miasa arakarakin'ny bilaoginy, BBS sy fandaharana mpanome hafatra eo no eo ao Shina, miaraka amin'ny fisoloana vavan'ny horonantsary bilaoginy izy.
Ireo vondrona roa QQ izay nilalao toerana tena ilaina ho an'ny hevitra vao maika nampahery ireo mpikambana vaovao mba hanaparitaka ny fandaharana fanampiana ho an'ny fampiasana ny ankizy ary nanampy azy ireo ho tonga foiben'ny vaovao izay afahan'ny olona mahazo ny vaovao farany momba ny ankizy mpitatitra ny fifandraisana akaiky amin'ny horonantsarin'ny mpanoratra. Kanefa, tsy fandehanantsambo tsotra ny hetsika eo amin'ny aterineto eo anivon'ny tsy fahatokisan'ny Sinoa an'ny Aterineto. “Raha ny tena izy, ambany tsindry be izahay rehetra. Olona be dia be no nijery anay ary nanana ny heviny manokana momba ny zavatra nataonay,” hoy i Guo Jun, ilay namorona ny vondrona QQ voalohany ho an'ny fisoloana vavan'ny horonantsary bilaogin'ni Alun, “ny olona sasany miteny fa adala izahay ary miresaka tsy misy hetsika fotsiny ary nisy izay nino fa hosoka izy ity.” “Kanefa, rehefa mahatsiaro reraka aho, mijery ny horonantsary aho. nahatonga ahy hanohy ny fijalian'ireo ankizy.”
.Fanehoankevitra eo amin'ny horonantsary bilaogin'i Alun:
Zaza miasa~indrisy~tena~loza be~ity tany ity~
Na dia izany aza, tsara ny feon'ny vahoaka tahaka izay. Manohana~!!
Maro ny ankizy mila fanampiana. Afaka mahazo ny fijerin'ny haino aman-jery daholo ve izy ireo???Mihoatra kelin'ny rano mitete mianjera ao an-dranomasina ilay ankizy voavonjy teo.
Tena ilaina ny manao asa mahomby mba hifanentana amin'ity fiarahamonina lazaina fa mirindra ity.
Manantena fa afaka manome fijery bebe kokoa an'ireo olona sahirana ny governemanta.
Inona no nataon'ny governemanta teo aloha? Andriamanitra no mahafantatra hoe ankizy firy no mbola mirenireny tsy any an-tsekoly.
Raha tsy nisy ny loza nitranga, tsy nanampy ny olona.
Malahelo be aho manoloana an'io. Tsy afaka hinoana fa mbola misy ankizy mifikitra mafy amin'izao fotoana izao. Midera azy ireo aho.
Manantena fa mbola misy olona tsara fanahy eto ambonin'ny tany.
Mafy loatra ny fiainana ho an'ireo ankizy ireo. Tsara fanahy sy marina izy ireo satria fantar'izy ireo ny miaina amin'ny asa.
Araky ny horonantsary faran'i Alun, niverina tany an-tsekoly daholo ilay ankizy telo ary nanorim-ponenana indray. Miaraka amin'ny fiantraikany be an'ilay hevitra, ankizy miasa betsaka ao amin'ny tanànan'ny Bijie no hita ary voavonjy.
Yang Guo, iray amin'ireo ankizy telo mpitatitra arintany notaterin'i Alun, mianatra ao an-dakilasy.
Yang Guo sy ny mpiara-mianatra aminy any an-tsekoly.
4 andro izayFilipina
Hidilyn Diaz, vehivavy filipiàna mpibata fonjamby tafiditra ao anatin'ny tantara raha nahazo ny medaly volamena Olaimpika ho an'i Filipina
2 herinandro izayShina
Niteraka tsikera an-tserasera ny fikasan'ny tanàndehibe Shinoa handrara ireo olona tsy vita vaksiny hiditra ny toerana ho an'ny daholobe
2 herinandro izayMyanmar (Birmania)
Hetsipanoherana sy ozona ary sarintsarim-pandevenana no nentina nankalaza ny tsingerintaona nahaterahan'ilay namolavola ny fanonganam-panjakana tao Myanmar